Real Madrid oo ku guuleysatay horyaalka naadiyaasha Yurub - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSportsReal Madrid oo ku guuleysatay horyaalka naadiyaasha Yurub
June 4, 2017 Puntland Mirror Sports 0
Real Madrid oo ku guuleysatay horyaalka naadiyaasha Yurub. [Sawirka: Twitter]
Cardiff-(Puntland Mirror) Kooxda kubada cagta Real Madrid ayaa ku guuleysatay horyaalka naadiyaasha qaarada Yurub kadib markii ay xalay oo Sabti ahayd kooxda reer Talyaani ee Juventus ku garaacday 4-1, ciyaarta kama dambaysta ahayd oo ka dhacday magaalada Cardiff ee dalka Wales.
Xidiga reer Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa furay goolasha markii ay ciyaartu maraysay 20 daqiiqo qeybteedii hore, waxaana uu noqday ciyaartowgii ugu horeeyay oo saddex final oo horyaalka naadiyaasha Yurub ah gool ka dhaliya.
Kooxda Juventus oo lagu naanaayso “Marwada Duqda ah” ayaa si deg deg ah uga jawaabcelisay gooshii Ronaldo labo daqiiqo kadib markii weeraryahanka Reer Croatia Mario Mandzukic uu kubad labo lagooti ah u ku dabo mershay goolhayaha Real Madrid Navas.
Ciyaarta ayaa qaybteedii hore ku dhammaatay 1-1.
Intii lagu guda jiray qaybtii labaad ee ciyaarta daqiiqadii 61-aad, dhex hayaha reer Brazil Casemiro ayaa laad uu tuuray waxaa isku saray ciyaartowga reer Germany ee u ciyaara Juventus Sami Khedira taasoo keentay in uu gaari waayo goolhayaha da’da weyn ee Juventus iyo Qaranka Talyaaniga Gianluigi Buffon. Waxaana gooshaas ciyaarta ka dhigtay 2-1 oo Real Madrid ku hoggaaminayso.
Ronaldo ayaa gooshiisii labaad ku darsaday daqiiqadii 64-aad taasoo kooxdiisa uu awooda ugu dhiibay 3-1 in ay ciyaarta si raaxo leh ugu hoggaamiyaan.
Sergio Asensio ayaa goosha afraad u dhaliyay Real Madrid taasoo Real Madrid ka dhigtay naadigii kowaad oo ku guuleysta horyaalka kooxaha Yurub labo sanno oo isku xiga tan iyo markii laga badalay magaca sanadihii 1992-ilaa 1993-dii.
Guusha ayaa sidoo kale ka dhigaysa Real Madrid in ay tahay kooxda ugu badan oo haysata koobka iyada oo ku guuleysatay 12 koob oo ah horyaalka naadiyaasha Yurub.
July 16, 2018 France oo ku guuleysatay Koobka Adduunka 2018
May 31, 2018 Zinedine Zidane oo iska casilay macalinimada Real Madrid
July 11, 2016 Portugal oo koobkoodii ugu horeeyay ee qaramada qaarada Yurub ku guulaystay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex kamid ah ilaalada Soomaalida ah ee Qaramada Midoobay ayaa ku dhaawacmay kadib markii qarax gaari oo loogu rakibay gaarigooda uu ka dhacay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho maanta oo Arbaco ah, [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa u magacaabay Yaasiin Cumar Dheere taliyaha cusub ee ciidamada Daraawiishta, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxtooyada maanta oo Sabti ah. Taliyihii ka horeeyay Cabdishukri Cabdullaahi [...]
Las-ano-(Puntland Mirror) At least two people were killed in spate of shootings occurred in Las-ano town of Sool region last night, residents told to the Puntland Mirror. Unidentified gunmen armed with pistols have shot dead Abdi [...]